Syria: Mitohy Miha-Mahazo Vahana ny Hetsi-Panoherana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Marsa 2011 13:03 GMT
Mitohy ny hetsi-panoherana ao Daraa, any atsimon'i Syria, izay isian'ny tatitra milaza fa mpanao fihetsiketsehana dimy no maty omaly ary iray hafa androany.
Raha ny tati-baovao milaza fa nandoro tranom-panjakana avy eo ireo mpanohitra, ny mponin'ny aterineto sy ireo mafàna fo kosa manamafy fa ny tafi-panjakana no nandoro ireny trano ireny. Mandritra izany, maro ireo ao amin'ny Twitter no manamafy fa i Daraa no mety ho ny Sidi Bouzid an'ny Toniziana. Sidi Bouzid dia ilay tanàna niaingan'ny revolisiona Toniziana nanongotra an'i Zeine Al Abdideen Ben Alii izay efa nitondra ho 23 taona.
i Syria no firenena farany amin'ireo niditra tanatin'ny onjan'ny fanoherana taty amin'ny faritra Afovoany Atsinanana. Raha nandamoaka ireo antso teo aloha tamin'ny 5 Febroary mba hanao hetsi-panoherana, nahavita nitarika olona anjatony maro hirotsaka an-dalambe tany amina tanàna samihafa kosa ilay antso vaovao natao tamin'ny 15 Martsa, ka isan'izany ny tao Damaskaosy renivohitra, sy tao Aleppo. Raha vitsy no fahitàna ny isan'ny olona, dia efa fiandohana manan-danja kosa io any Syria izay tsy nihainoana mihitsy ny feon'ireo izay manohitra ny governemanta, ary izay rehetra mariky ny tsy hafaliana dia nofihazana tamin-kery mafy tokoa.
Indreto fanehoan-kevitra vitsivitsy tao amin'ny Twitter momba ny fivoarana farany avy eny ifotony:
@razaniyat: Mpanao fihetsiketsehana dimy no maty hatreto tao #Daraa novonoin'ny tafi-panjakana Siriana. Tsy hanadino velively ireo maritioranay izahay. Na oviana na oviana. #Syria
@monaeltahawy: Ny Fahefana #Assad – ny rainy aloha dia avy eo ny zananilahy – tsy manavaka amin'ny famonjàna: na zaza na lehibe dia fonjaina avokoa. #Syria #Daraa #March15
@daniachebib: Manana vavahady famoahana lahatsary i #Daraa ankehitriny: http://tinyurl.com/6hl7ebx na teo aza ny fandrakofana zara raha nisy nataon'ny fampahalalam-baovao iraisam-pirenena. AN'ALINY no eny an-dalambe ANDROANY!! #Syria #March15
@gyonis: Ny tanàna Sirian ao Dara'a dia any atsimon'i Syria http://en.wikipedia.org/wiki/Daraa
@AJEnglish: Mandoro tranom-panjakana ireo mpanao fihetsiketsehana: olona iray no maty raha mbola mitohy hatrany ny hetsi-panoherana any atsimon'i tanànan'i Daraa … http://aje.me/eVcW14
@Amaterasujp: Nodoran'ny vahoaka ny lapan'ny fitsarana sy tarnobe hafa taorian'ny andro telo nifanesy tsy nitsahatra nisian'ny hetsi-panoherana tany amin'ny tanàna farany atsimo ao Syria, Daraa.
@razaniyat: Haytham Manna’ tao amin'ny France24: Nangataka ahy manokana ireo mpanao fihetsiketsehana tao #Daraa mba hanamafy fa ry zareo dia tsy nandoro trano izany na iray aza. Tsy azo antoka ny vaovao. #Syria
@iyad_elbaghdadi: Nirehitra ny foiben'ny antoko Baath tao Daraa, tanàna Siriana. #Syria
@ZsofiaT: Haytham Manna’ tao amin'ny France24: VAO MAFANA: TSY ny mpanohitra no nandoro trano tao #Daraa fa ny mpitandro filaminana. #Syria
@AhmadHKh: Dia i #Daraa ve ao #Syria no hanjary #sidibouzid tany #Tunisia ?
@M_akbik: Tonga nanatevin-daharana ny mpanao fihetsiketsehana ireo olona any Da'el, faritra ambanivohitr'i #Daraa tamin'ny Alahady alina http://goo.gl/oZe1X #Syria
@BigAlBrand: ankizy 15 no voasambotra tao #Daraa. Ny maro amin'izy ireo dia latsaky ny 15 taona daholo. Namafisin'ny governemanta izany. #Syria.
@ZetonaXX: Maika be Daraa: Fahatongavan'ny fiara-miaramila efa maherin'ny 200 feno olona mirongo fiadiana avy amin'ny Mpiaro ny Repoblika, mitafy mainty!!#syria
@razaniyat: Manantena ny haheno an'i Azmi Bsraha sy Nassralla hiteny fanitsakitsahana zon'olombelona taon'ny mpitondra ao #Syria any #Daraa aho. Raha tsy izany dia ho diso fanantenana tanteraka.
@Memetak: Nofeperan'ny @SyrianJasmine @generativeid Siriana ny fifandraisan-davitra, be no tsy mahalala izay zava-mitranga ao Daraa, antenaina mba ho andron'ny fahalalahana ny ampitso
@maher0007: Izay mitranga ao #Daraa androany dia asan-jiolahimboto tsotra izao na iza hiteny na iza handiso, rehefa manolotra tanàna am-pilaminana aho na dia amim-pihatsarambelatsihy aza. #Syria
@NohaZayed: Ny pejin'ny revolisiona ao #Syria dia miantso hetsi-panoherana rahampitso manerana an'i Syria mba ho fanohanana an'i Daraa & ho fankalazana an'i Nayrouz bit.ly/guyAyy
Ao anatin'ity lahatsary ity, avy amin'i freeknight2011, hita entina mankao amin'ny trano fivavahana iray ao Daraa ireo mpanao fihetsiketsehana naratra.
Dia nisy nanome fanehoan-kevitra toy izao manaraka izao:
Ampahany maneho mpanao fihetsiketsehana naratra tsaboina ao anatin'ny toeram-pivavahana Omari ao Daraa, Syria tamin'ny 20 MArtsa 2011. Nampiasa entona mandatsa-dranomaso sy bala fingotra ary bala tena izy ny governemanta hamelezana ireo vahoaka analiny nanao fanoherana.
Ity lahatsary ity, avy any Dael, izay any amin'ny 15 km eo ho eo miala an'i Daraa, dia mampiseho alina iray nanaovna fahoherana tany an-toerana.
Ity manaraka ity no fanazavana miaraka aminy:
“Nanao fihetsiketsehana ireo tanora avy ao Dael (15km miala an'i Daraa) ho fanohanana an'i Daraa, ka tao no niventesan-dry zareo ny hoe: Allah, Syria ary Fahalalahana. Tsy nisy tahotra taorian'ny androany. Nanomboka tao amin'ny toeram-pivavahana ny hetsika taorian'ny nandraisan'ireo mpanao fihetsiketsehana ny fitaovana fanamafisam-peo ary ny fangatahan-dry zareo dia ny hitsanganan'ny vahoaka hanohana an'i Daraa.
Namakivaky ireo lalambe be mpampiasa ireo mpanao fihetsiketsehana,